Maamulka Axmed Madoobe oo iska fogeeyay warar maalmahaani la baahinaayay |
Maamulka Axmed Madoobe oo iska fogeeyay warar maalmahaani la baahinaayay
Maamulka KMG Jubba ayaa iska fogeeyay war sheegaya in maalmahaani ay Ciidamada Maamulkaasi dilal kala duwan u geysanayeen dadka shacabka ee ku nool Magaalada.
Ismaaciil Kheyre Dhuxuloow oo ka mid ah saraakiisha ugu sareysa Maamulka oo manta la hadlay Saxaafada ayaa sheegay inuu beeninaayo wararka ku aadan in Ciidamada Maamulka Jubba ay xeebaha Kismaayo ku dilaan dadka shacabka ee Howlgalada lagu soo qabto kadibna meydkooda ku tuuraan Badda.
Sargaalka ayaa sheegay in falkaasi gurcan ay geystaan Maleeshiyaadka Alshabaab ee ku dhuumaaleysanaaya qeybo kamid ah Deegaanada uu Maamulka ka arimiyo.
Sidoo kale, isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu Sargaalka qiray in xeebta magaalada Kismaayo laga helay Meydadka dad shacab ah, hase ahaatee ay wadaan baaritaan ay ku ogaanayaan sababta loo dilay iyo cidda ka dambeysay.
Nuqul kamid ah hadalkiisa ayaa waxaa kamid ahaa “Dadka waxa laynaya waa dad doonaya inay shacabka kiciyaan oo dadka dhiigiisa baneysanaya, waxaan ognahay dadka wax dilaya in ay yihiin Al-shabaab oo doonaya in maamulka loo maleeyo”
Dhanka kale, hadalka Sargaalkaani ayaa waxa uu imaanayaa, iyadoo maalmihii ugu dambeeyay Magaalada Kismaayo lagu arkayay meydadka dhalinyaro lagu qabtay Howlgalo ka dhacay Kismaayo, islamarkaana la dilay